Amazon – Networks – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Boys (2019) Season2Complete Unicode ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်းက ထွေထွေထူးထူးတော့ထပ်ပြောစရာမရှိဘူး… စူပါ ပါဝါရြပီး လူတွေကိုအကျိုးပြုနေတဲ့ Hero တွေရှိသလို အနိုင့်ကျင်ပြီး ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးချနေတဲ့ သူရဲကောင်းဟန်ဆောင်ထားတဲ့ မိစ္ဆာလိုကောင်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်… ဒီလိုကောင်တွေကြောင့် တစ်ချို့သောသူတွေ အများစွာထိခိုက်နေပေမယ့်လည်း Supervillain လိုကောင်တွေဟာ အင်အားကြီးတာရော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာရော ထောက်ခံနေတဲ့သူတွေများနေတာကြောင့် ဒေါသတွေကိုမြိုသိပ်နေရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်… ဒီအထဲမှာမှ ဘဝက သေလည်းမထူးဘူး …ဒီလိုစူပါပါဝါရနေတဲ့ အရူးတွေကို ရသလောက်ပြန်သတ်မယ်ဆိုပြီး The Boys ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့…. SE1 ထဲက ရှယ်ကြမ်းသလို SE2 မှာလည်းပိုတောင်ကြမ်းလာပါတယ်…ဒီစီးရီးက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကြ ကိုးကွယ်ရတဲ့စူပါဟီးရိုးတွေမဟုတ်ဘဲ ဗီလိန်ကောင်တွေကို လိုက်ဗျင်းပြီး အားနည်းနေတဲ့အဖွဲ့လေးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်သားထဲအလိုလိုဖြစ်သွားပါတယ်…ပြီးတော့ ဗီလိန်စူပါပါဝါကောင်တွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကို လိုက်ရှာပြီး ဗျင်းဖို့လိုက်စဉ်းစားရတာလည်း တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်…အက်ရှင်ခန်းတွေ ဘယ်လောက်မိုက်ပြီး နင်းကန်ပီပြင်လည်းဆိုတာတော့ ထပ်ပြီးမပြောတော့ဘူး…. Credit Review ဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Rashida ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဇာတ္လမ္းတြဲအၫႊန္းက ေထြေထြထူးထူးေတာ့ထပ္ေျပာစရာမရွိဘူး… စူပါ ပါဝါျရပီး လူေတြကိုအက်ိဳးျပဳေနတဲ့ Hero ေတြရွိသလို အႏိုင့္က်င္ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသုံးခ်ေနတဲ့ သူရဲေကာင္းဟန္ေဆာင္ထားတဲ့ မိစာၦလိုေကာင္ေတြလည္းအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္… ဒီလိုေကာင္ေတြေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူေတြ အမ်ားစြာထိခိုက္ေနေပမယ့္လည္း Supervillain လိုေကာင္ေတြဟာ အင္အားႀကီးတာေရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနနဲ႔ရွိေနတာေရာ ေထာက္ခံေနတဲ့သူေတြမ်ားေနတာေၾကာင့္ ေဒါသေတြကိုၿမိဳသိပ္ေနရတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္… ဒီအထဲမွာမွ ဘဝက ေသလည္းမထူးဘူး …ဒီလိုစူပါပါဝါရေနတဲ့ ...
TMDb: 8.4/10 2083 votes
The Boys (2019) Season 1 Complete Unicode အခုထွက်ရှိနေတဲ့ Superhero ကားတွေအရဆို Superpower ရပြီး လူတွေကို ကယ်တင်အကျိုးပြုနေတဲ့ Hero တွေရှိတယ်။ လူတွေကို အနိုင်ကျင့် ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးချနေတဲ့ Supervillain တွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်လို့ ဒီ “Superhero” ဆိုတဲ့ လူတွေကိုယ်တိုင်ကိုက သူတို့အစွမ်းရှိတာကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွား၊ ဘဝင်တွေမြင့်ပြီး လူတွေကို မတူသလိုမတန်သလို ဆက်ဆံလာမယ်၊ အနိုင်ကျင့်လာမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဟောဒီ Amazon Prime ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်မှာ ဒီလိုပဲ Superhero ဆိုတဲ့ လူတွေဟာ သူတို့လုပ်ရပ်တွေကြောင့်မဆိုင်သူတွေ ထိခိုက်သေကြေကြရတယ်။ ဒါကိုမှ ဘာမှမဟုတ်သလို သူတို့ကြောင့်မဟုတ်သလို နေထိုင်နေ ကြတယ်။ ဒီလို စွမ်းအင်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေကို အလွှဲသုံးစားလုပ်လာတဲ့ “Superhero” တွေကို ပြန်ပြီးပညာပေး ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် The Boys ဆိုတဲ့အဖွဲ့က ပြန်ကြိုးပမ်းပါတော့တယ်။ ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကို DatShin မှ ကူးယူဖော်ပြသည်……… ဒီစီးရီးက ဇာတ်လမ်းကို ဆွဲဆောင်မှုရှိသလို အက်ရှင်ခန်းတွေလည်း ...
TMDb: 8.4/10 1537 votes